Iindaba -Inyathelo lokuchonga amanyathelo kwenkqubo ye-hydraulic yomatshini wokubumba ozenzekelayo
Icala lokuchonga amanyathelo enkqubo yesanti kubunzulu baphantsi komatshini wokubumba ozenzekelayo
Kukho iziphene ezininzi kwinkqubo hydraulic kumatshini yokubumba oluzenzekelayo. Umzekelo, ungcoliseko lweoyile lunokubangela uxinizelelo lokusebenza kwenkqubo yokulawulwa ngamanzi, ukuhamba okanye isikhombisi sokungasebenzi kakuhle, kwaye kuzise ubunzima obukhulu ekufumaneni isifo. Inyathelo elilandelayo kukwabelana ngamanyathelo oxilongo.
1. Imigaqo ngokubanzi yokufumanisa isifo
Ukusilela kwenkqubo ye-hydraulic koomatshini abaninzi bokubumba akwenzeki ngequbuliso. Sisoloko sinesilumkiso esinjalo ngaphambi kokusilela. Ukuba esi silumkiso asithotyelwa, siya kubangela ukungasebenzi kakuhle ngexesha lenkqubo yophuhliso. Izizathu zokungaphumeleli kwenkqubo yolawulo lwamanzi zininzi, ayizizo ezingahleliwe. Ukuze ufumane ngokukhawuleza nangokuchanekileyo iziphene zenkqubo, qonda ngokupheleleyo iimpawu kunye nemithetho yeziphene ze-hydraulic.
2. Jonga indawo yokusebenza neyokuhlala yenkqubo yolawulo lwamanzi
Inkqubo yokubumba yomatshini wokubumba kufuneka isebenze ngokwesiqhelo, kwaye imeko ethile yokusebenza kunye neemeko zokusebenza ziyafuneka njengeqonga. Ke ngoko, ekuqaleni koxilongo oluchanekileyo, kufuneka kuqala sigwebe kwaye siqwalasele ukuba iimeko zokusebenza nezokuphila kwenkqubo yolawulo lwamanzi kunye neengxaki zokusingqongileyo zamazwe ajikelezileyo ziqhelekile, kwaye silungisa ngokukhawuleza imeko engafanelekanga yokusebenza kunye nemeko yokufunda.
3. Chonga indawo apho isiphoso senzeke khona
Xa kugwetywa indawo enesiphoso, iimpazamo ezifanelekileyo kwindawo leyo kufuneka zichongiwe ngokwempazamo kunye neempawu, ngokuthe ngcembe zinciphise ubungakanani besiphoso, kuhlalutye unobangela wesiphoso, fumana indawo ethile yesiphoso, kwaye wenze lula iingxaki ezinzima.
4. Yenza ingxelo efanelekileyo yokusebenza
Ukufunyaniswa kwesiphoso kusekwe kwiirekhodi ezisebenzayo kunye nenkqubo ethile yolwazi lweeparameter. Ukusekwa kweerekhodi zokusebenza kwenkqubo sisiseko esibalulekileyo sokuthintela, ukufumanisa kunye nokusombulula ukusilela. Ukusekwa kwetafile yohlalutyo lwezixhobo ezinengxaki yokusilela kunokunceda iinkampani ukuba zichonge ngokukhawuleza imeko yokusilela.
Ibhokisi yesanti, Umatshini wokukroba ngaphandle, Flask zomngundo Machine, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Esingxobeni Ukubumbela, Ukubumba Ivoti Flask,